Root RAD140 (Iskeelka Qalitaanka) (1182367-47-0) hplc = 98% | AASraw
/ Products / SARMS / RAD140 (Testolone) budada
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada RAD140 (Testolone) (1182367-47-0), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada.
RAD140 (Tijaabo ah) video budada ah
Root RAD140 (Testolone) budada Calaamadaha aasaasiga ah
Name: RAD140 (Testolone) budada
Formula kelli: C20H16CIN5O2
Miisaankani waa: 393.826
Dhibcaha Biyaha: 447.57 ° C
Raw RAD140 (Testolone) isticmaalka budada ee wareegga steroid
Raw RAD140 (Testolone) Magacyada budada
Kalluunka RAD140 ayaa sidoo kale magaciisu yahay budada tijaabada ah (CAS 1182367-47-0).
Raw RAD140 (Testolone) Isticmaalka budada ah
Qiyaasta lagu taliyey ee RAD140 / Testolone way kala duwan tahay 20-30mgs maalin kasta, iyo mudada wareegidda wareegga waa 12-14weeks.
Digniin ku saabsan budada tijaabada ah ee Root
Mid ka mid ah qaybaha ugu rafciya ee RAD140, iyo dhammaan SARMS guud ahaan, waa maqnaashaha saameynaha, iyaga oo ka dhigaya qaar ka mid ah daroogooyinka kor u kaca ah ee waxtarka leh (PED) maalmahaas.
Rootiga Root RAD140 Talooyin dheeraad ah
Asal ahaan, testolone wuxuu u keeni karaa faa'iidooyin aan fiicnayn ah ee cayaaraha ah iyada oo aan kharashka saameynaha caanka ah la arki karo steroids ee anabolic androgenic. Farshaxanka, testolone wuxuu si weyn u kordhin doonaa murqaha iyo xoogga. Sidaa awgeed, RAD140 waxay noqon doontaa wax aad u weyn oo loo maro nooc kasta oo wareeg ah, halkaas oo ay ku siin doonto dhammaan sifooyinkaasi iyada oo aan wax saameyn ah oo dheeraad ah.
Daawada budada ah ee tijaabada ah (CAS 1182367-47-0)
Suuq-geynta Rootka RAD140
Sida loo iibsado budada RAD140 (CAS 1182367-47-0); ka iibso budo tijaabo ah oo ka sameysan AASraw
RAD140 Mucadooyinka budada:
Soo iibso budada RAD140 online: 8 xaqiiqooyinka waa inaad ogaatid !!!
Soo iibso RAD140 (Testolone) budada: Waa maxay RAD140 loo isticmaalo?
Soo iibso budada Testolone ee dhismaha jirka: saameynta RAD140 waa inaad taqaanaa!
2 dib loogu talagalay RAD140 (Testolone) budada
RAD140 (Testolone) budada waa dahab
Adeeg weyn. Qiimaha ka fiican Irc.bio ama meel kale oo aan helay. Waxay kuugu ilaaliyaan marxalad kasta oo maraakiibta. Adeeg shakhsiyeed oo weyn. In ka badan laba toddobaad ayaa la gaaray. RAD-140 wuxuu ku saabsanaa USD46 / gram at the size of the minimum 10.i wuxuu jeclaan lahaa inuu iibsado wax ka badan mustaqbalka !!!